नेपाली शेयर बजार चरममा पुगेकै बेला सुन सस्तिने समय आएको हो ? « Artha Path
काठमाडौं । अहिले शेयर बजार धेरै बढेको र यसले जोखिम पनि चुलिएको भन्दै लगानीकर्ताहरु अब नाफा बुक गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । पछिल्ला दिनमा शेयर बजारको बढ्दो चक्र रोकिँदै जानुले यही संकेत गर्छ । धेरै लगानीकर्ता अब बढ्दो क्रम सकिएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । यद्यपि, कतिपयलाई अझै पनि बजारले नयाँ उचाइ तय गर्ने आशा बाँकी नै छ ।
यस्तो बेला शेयर बेचेको पैसा कहाँ लगानी गर्ने ? यो निकै चोटिलो प्रश्न हो । पैसा भएपछि मान्छेले फुर्मास खर्च बढी गरेर सक्छन् भन्ने डरले यसको उचित लगानीको बाटो खोज्ने गर्छन् । तर यस पालि घरजग्गा र विलासी गाडीमात्र होइन, आउँदै गरेको तीज र दशैंका लागि गरगहना जोड्ने पनि राम्रो मौका हुने देखिएको छ । पछिल्ला केही पुर्वानुमानले आउँदा तीन महिना सुनको भाउ सस्तिन सक्ने संभावना देखाएको छ ।
धेरै पछि सुनको अन्तराष्ट्रिय बजार भाउको मूल्यले तयार पारेको रेखाचित्रमा ‘हेड एण्ड सोल्डर’ भनिने एक विशेष आकृति देखा परेको छ । रेखाचित्रमा मान्छेको शीर र दुई काँधको आकारजस्तै देखिने आकृतिलाई ‘हेड एण्ड सोल्डर’ भन्ने गरिन्छ । यस्तो आकृतिले कुनै पनि बस्तुको मूल्य भविष्यमा घट्नसक्ने संभावना दर्शाउँछ । यद्यपि, यसका लागि यो प्रबृत्तीले पूणर् आकार ग्रहण गर्नुपर्छ ।
अहिलेको अस्थाबाट प्रतिऔंश ४० अमेरिकी डलरभन्दा धेरैले सुनको भाउ घट्यो भने यो आकृति पूणर् हुन्छ । जसले आगामी दिनमा सुन झण्डै १०० डलर सस्तिने मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । तीन दिनयता लगातार बढिरहेको सुनको भाउ अझै एक-दुई दिन बढेर ओरालो बाटो समात्नसक्ने संभावना छ ।
‘दी इकोनोमी फोरकास्ट एजेन्सी’ले आगामी सेप्टेम्बरसम्म अर्थात् तीन महिनाभित्र सुनको भाउ कम्तिमा १४२४ अमेरिकी डलरसम्म झर्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो भनेको अहिलेको भाउभन्दा ३५७ डलर कम हो । एक औंशमा यतिधेरै मूल्य सस्तिनुको अर्थ हो, तोलामै १४७ डलरसम्म सस्तिनु । अर्थात् सुन यो तीन महिनामा असाध्यै सस्तियो भने करीब १७ हजार २ सय रुपैयाँसम्म भाउ घट्नसक्ने संभावना उक्त प्रक्षेपणले दिएको छ ।
अक्टोबर र नोभेम्बरमा पुनः सुन महँगिएर डिसेम्बरमा सस्तिन सक्ने आँकलन गरिएको छ । तर भारतीय डिलरहरुको प्रक्षेपण भने अझै सुन महँगिन सक्छ भन्नेमा छ । यसको एउटा कारण चाहीँ डलरसँगको विनिमय दर हो । पछिल्लो समय कोरोना महामारीको संभावित तेस्रो लहरले भारतीय अर्थतन्त्रमा जटिलता थप्नसक्ने आँकलन गरिएसँगै भारतको मुद्रा निकै सस्तिन थालेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले भारतको शेयर बजारबाट लगानी फिर्ता लगिरहेका छन् । थप विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बनिसकेको छैन । भारतमा अहिले करीब १ अर्ब ३९ करोड जनसंख्या रहेको अनुमान छ । यसमध्ये हालसम्म ३५ करोड १२ लाख जनालेमात्रै कोरोनाको खोप लगाउन पाएका छन् । यसले सम्भावित तेस्रो लहरप्रतिको त्रास बढेको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि सुनको भाउ भारी मात्रामा कम भयो भने डलर महँगिदा समेत नेपाली बजारमा अहिलेभन्दा सस्तोमा सुन पाइने संभावना हुन्छ । खासगरी पश्चिमा मुलुकमा कोभीड विरुद्धको खोप अभियान निकै अघि बढिसकेको छ । धनि मुलुहरुमा धेरै जनसंख्यामा खोप लगाउँदा यसले सुनको अन्तरराष्ट्रिय मागलाई केही हदसम्म घटाउन मद्दत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
रेखाचित्र विश्लेषणले पनि अहिलेको विन्दुबाट प्रतिऔंश १०० डलर सस्तिने संभावना प्रबल देखाउँछ । त्यसपछि पनि कम्तिमा १४५० देखि १५५० डलरको बीचमा झर्नसक्ने संभावना देखिएको छ । यसो भयो भने अहिले उचाइमा पुगेको शेयर बेचेर तीज र दशैंका लागि गहना जोड्न चाहने नेपालीलाई निकै राम्रो अवसर प्राप्त हुने छ ।